> Resource > Talooyin > Save Taariikhda Card ah: Sida loo sameeyo gaar Save a Taariikhda Card ah
Maalin maalmaha ka mid, laba aad u tageen inay xeebta iyo wada dhisi qalcaddii ciid ah. Markaasay aad saaxiib aad ka codsaday in la helo wax la yaabay in qalcaddii cammuudda - oo aad heshay giraan shaqaysiinta! Wuxuu ka soo dejiyey on jilibka ka mid ahaa oo soo jeediyay " inaad i guursadaan ? " Halkan ka mid tahay soo jeedinta merriage seenyada. Version ayaa Diintiinii waana laga yaabaa inuu ka sii gaar ah ka badan. Laakiin hal shay waa isku mid. Waxaad ku hawlan yihiin. Waa markii si odhan cod weyn, waxa ay dhihi kuwa kibirka leh, oo kuwaasu dadka ha badbaadiyo taariikhda waayo, maalintii aad u weyn.
Waxaa jira siyaabo badan si aad ugu dhawaaqdo ka qaybgalka, oo ay ku jiraan mail dhawaaqay, dhawaaqay wargeyska, website dhawaaqay iyo wixii la mid ah. Habka ugu caansan waa in ay badbaadin card taariikhda iyo soo diray inay saaxiibada iyo qoyska. Ee Save The kaararka Date si fudud loo dhigay ayaa laga yaabaa in midab aad jeceshahay iyo qaabka, iyo sida loo isticmaalo ee dhammaan Hababka. Fikrad kale oo weyn oo uu nagu ti abuuro badbaadin card taariikhda video ah. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare DVD Muqaal dhise . Hadda d ownload iyo rakibi gaare kaarka:
Tallaabo 1: Ku dar sawiro ama videos
Burcad Muqaal DVD ah dhise iyo waxa maamula marka rakibaadda dhamaystiran. In shaashadda soo dhawaynayaa, dooro "Standard Mode". Markaas guji "Add Files" in lagu daro photos videos ama aad si waqtiga.
Talaabada 2: Samayso Save Taariikhda Card gaarka ah
Tag ah "shakhsiyeeyo" tab. Sida aad arki karto, waxaa jira arrimo badan oo lagu daro. Haddii aad si gaar ah u jecel template ah, waxa ay sii kordhineysaa in ay Favorites adigoo gujinaya icon xiddiga wanaagsan mar dambe helo.
Ku qor wordings kaarka: Tan waa kaarka badbaadin taariikhda, wordings waa waxa ugu muhiimsan. Hubi in waxyaabaha kuwan waxaa ka mid ahaa: horyaalka, magaca lamaanaha, taariikhda, iyo goobta. Waxa fiican in aad ku darto oo aad website arooska cinwaanka, ogeysiis kaarka martiqaadka iyo sidoo kale qaar ka mid ah qurxinta in aad badasho. Waxaad riix kartaa "Edit" in lagu daro aad qoraalka. Markaas sheeg style gaar ah si ay wordings adiga oo isticmaalaya qalabka uu furmo, oo ay ku jiraan noocyada, saamaynta gaar ah, midabka, dulmar, hooskii, iyo opacity.
Talaabada 3: badbaadi ama wadaagaan card taariikhda
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh aad shakhsi mooyee card taariikhda oo guji "Abuur" si loo badbaadiyo ama la wadaagto card taariikhda. Waxaad dooran kartaa in uu badbaadiyo qaabab kala duwan, geliyaan si ay u YouTube ama DVD ah ku gubtaa.